अष्ट्रेलियासँगको सिरिजका लागि भारतद्वारा टिम घोषणा, टिममा अटाएनन् रोहित शर्मा ! » Onlycricnepal
Home/ODI/अष्ट्रेलियासँगको सिरिजका लागि भारतद्वारा टिम घोषणा, टिममा अटाएनन् रोहित शर्मा !
अष्ट्रेलियासँगको सिरिजका लागि भारतद्वारा टिम घोषणा, टिममा अटाएनन् रोहित शर्मा !
१० कार्तिक २०७७, सोमबार २१:३७
काठमाडौं, ८ कात्तिक : भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)ले अष्ट्रेलियासँगको सिरिजका लागि टोली घोषणा गरेको छ ।
बीसीसीआईले आज टी-२०, वानडे र टेष्ट सिरिजका लागि टोली घोषणा गरेको हो । टोलीमा केही नयाँ अनुहार पनि देखिएका छन् ।
केही खेलाडीले भने लामो समयपछि कमब्याक गरेका छन् । भारत र अष्ट्रेलियाबीचको सिरिज डिसेम्बरमा सुरु हुनेछ ।
आसन्न सिरिजमा टिमका उपकप्तान रोहित शर्मा टोलीमा अटाएका छैनन् । त्यस्तै, टेष्ट टिमका महत्वपूर्ण सदस्य इशान्त शर्मालाई पनि टिममा समावेश गरिएको छैन । सायद यी दुई खेलाडी चोटका कारण पनि टिममा समावेश नभएको हुन सक्ने भारतीय मिडियाले लेखेका छन् ।
श्रीलंकाले दियो वेष्ट इन्डिजलाई ३४६ रनको लक्ष्य, कुसल–फर्नान्डोको शतक
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:४८
संकटमा भारतीय टिम, कोहली लगत्तै श्रेयस पनि सस्तैमा आउट!
२९ पुष २०७६, मंगलवार १०:४३
वानडे सिरिजः श्रीलंकाविरुद्ध होपको शतक पूरा
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार ०७:१५
भारतलाई अर्को झड्का, शतक बनाउन चुके शिखर